Umhla My Pet » 5 Amanyathelo ukuba boyise imiqobo Ulwalamano Communication
ngokuthi Lesley Sheridan
5 Amanyathelo ukuba boyise imiqobo Ulwalamano Communication
ukubuyekezwa: Sep. 19 2020 | 2 min ukufunda
Izibini ngokungenakunqandwa udibana ndakhutywa unxibelelwano endleleni, nokuba sele abasandula ndithandana okanye kubhiyozela amashumi kunye. Ezi ndingagevezeli kunzima eyaphumela kwaye kufuna iinzame abazi ukuba omabini amaqabane. Ukukhumbula ezi ngcebiso zilandelayo ziya kuba luncedo kuloo ngasonye ekugqibeleni:
1. Kuphephe unyango cwaka: bobabini abasetyhini kunye namadoda netyala eli qhinga, kwaye ke kakhulu kuyingozi. Yavala ngokuyimfuneko uluvalile iqabane lakho ngaphandle, kwaye akukho luncedo ukujongana nemiba ngenene ngesandla. Nakuba oko kunokubonakala, ukusebenzisa amazwi akho ukubonisa iimvakalelo zakho, Musa ukoyika ukufumana ezithile. khumbula, umntu unelungelo uza kusebenza nani phezu iingxaki kubudlelwane, ukusebenzisa iimvakalelo zakho izixhobo ngakuwe.
2. Musa ukwenza okucingelwayo: Ngokufanayo unyango cwaka, cingela omnye umzekelo nokushiya uluvo iqabane lakho ngaphandle, kwaye loo nto nje not fair ukuba nokuba umntu. Mhlawumbi bacinga ukuba iimpendulo zakhe mfutshane ayithethi ukuba ulahle umdla, kodwa ukuze nje kakhulu kuqhubeka emsebenzini. Ukuba ngaba ucele nayama endaweni kwingcinga yakho, wena azuze inyaniso, kwaye mhlawumbi uzibeka esichengeni kwingxoxo ezinkulu ekupheleni.
3. Compliment imikhwa elungileyo: Ukuba uziva ngathi iqabane lakho akabonisi ukuba uthando kangangoko phambi kokuba, zama sizivuse ngendlela afezekise ngokusebenzisa icebiso. "Ngokwenene ndimthanda iihagi zakho,"kwaye, "Ndikhumbula imiyalezo kusasa yakho,"Zombini imizekelo non-esisongela yokukhuthaza iintshukumo ningxamele. Le ndlela, ufumana ingongoma yakho liphela naluphi ulwimi kokumgxeka.
4. Eyakho iimvakalelo zakho: Amadoda nabafazi bobabini ngokweemvakalelo, kodwa bona badla ukubonisa izivo ngeendlela ezahlukileyo ngokupheleleyo. Ibhinqa kukhala, kwaye umntu ligwele. Zombini ziimpendulo esebenzayo ngokweemvakalelo, kwaye omabini ekwiindidi umntu oziva ngayo. Kunokuba uxelele iqabane lakho, "Ukwenza ukuba uzive usisidenge ukuba,"Leyo ingxelo kokumgxeka, ukucacisa iimvakalelo zakho ithoni isimnini, unike ingcaciso.
Umzekelo, "Ndaziva isiyatha wenza xa joke Blonde sisidenge" ingaphantsi ephikisa ngaphezu, "Usoloko ndizive usisiyatha." La mazwi yokuqala kwakhona inika iqabane lakho ithuba lokuchaza yena umenza azi umthombo yokwenene umba.
5. Hlala ulungile: Le toughie, Ndiyazi! Kulula kakhulu ukuba nomsindo okanye bathethe izinto wena akuthethi. Zama kangangoko unako ukuba zihlale zinethemba nokusebenza awaba nayo obnempilo umba. qiniseka, izinto zihamba ngokuqhushumbisa amaxesha. Nantso yinxenye eqhelekileyo yabantu ababini ukwabelana ubomi babo kunye. Nje khumbula ukuba sihlale sikhumbula izizathu ube ndawonye kwindawo yokuqala, kwaye wabeka kugxininiswa ekugcineni umtshato.
Ndithandana Mfazi Omnci Emva Uqhawulo Made Easy
6 Types of Men Women intooyikhangelayo
Tips Abe Chick Magnet
Indlela Yokusondela Women Ukuba uneentloni?